Noraran'i Torkia ny fifohana sigara an-dalambe noho ny ahiahy COVID-19
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vorontsiloza Travel News » Noraran'i Torkia ny fifohana sigara an-dalambe noho ny ahiahy COVID-19
Ny lehiben'ny Ministeran'ny Fahasalamana any Torkia, Fahrettin Koca
Noho ny fitomboan'ny isan'ny tranga Covid-19 any Torkia, ny manampahefana ao amin'ny firenena dia nametraka fandrarana ny fifohana sigara amin'ny arabe feno olona sy amin'ny fijanonan'ny fitateram-bahoaka.
Manan-kery ny lalàna vaovao amin'ny 12 Novambra. Nohazavaina fa, raha ny filazana boribory efa navoaka teo aloha, ny olom-pirenena dia takiana mba hisaron-tava amin'ny toerana rehetra ho an'ny daholobe, afa-tsy ireo trano fonenana. Saingy olona maro no manala ny sarontava na mametraka azy ireo rehefa mifoka.
Ny boriborintany vaovao iray avy amin'ny Minisiteran'ny Atitany Tiorka dia nanasongadina fa mba hisorohana ny fihanaky ny aretina COVID-19 dia "zava-dehibe tokoa ny fiantohana ny fitohizan'ny fampiasana sarontava."
Raha ny angom-baovao farany, 400 19 mahery ny olona voan'ny COVID-11 any Torkia, olona maherin'ny 2,693 no maty. Androany, tranga vaovao miisa 19 COVID-29 no tsikaritra ao amin'ny firenena, izay ny isa ambony indrindra hatramin'ny XNUMX aprily.
Ny lehiben'ny Minisiteran'ny Fahasalamana any Torkia, Fahrettin Koca, dia nilaza fa nahatratra ny tampony faharoa ny areti-mifindra coronavirus ao amin'ny repoblika. Talohan'izay dia voalaza fa tao anatin'ny valanaretina COVID-19, dia nitombo be ny isan'ireo olona te hiala amin'ny sigara.